"Ma Hubo Inaan Sii Joogayo Xili Ciyaareedka Dambe" - Zinedine Zidane Oo Wadne Gariid Ku Riday Real Madrid - Gool24.Net
“Ma Hubo Inaan Sii Joogayo Xili Ciyaareedka Dambe” – Zinedine Zidane Oo Wadne Gariid Ku Riday Real Madrid
Tababare Zinedine Zidane ayaa hadal dhul-gariir ah ku tuuray kooxdiisa Real Madrid, waxaanu u sheegay in aanu hubin inuu sii joogi doono naadiga xili ciyaareedka soo socda, xilli ay Los Blancos maalin ka hor ku guuleysatay horyaalka LaLiga, isla markaana isku diyaarinayso ciyaara ugu dambaysa horyaalka ee Leganes.
Real Madrid ayaa xasuusan sidii lama filaanka ahayd ee Zidane ugu dhawaaqay iscadilaadda sannadkii 2018, markaas oo naadigu aanay dhamaysanin dabbaal-degga hanashada saddex Champions League oo xidhiidh ahaa.
Warbaahinta ayuu Zidane kula hadlay magaalada Madrid ka hor kulanka Leganes, waxaana wax laga weydiiyey mustaqbalkiisa, laakiin jawaabta kasoo baxday ayaa noqotay mid lama filaan ah, waxaanu yidhi: “Su’aashaada waxaad ku xustay wax kasta marka laga reebo kulanka berri iyo Champions League. Wali waxa jira arrimo na horyaalla, mana doonayno inaanu ka hadalno xili ciiyaareedka dambe anagoo aan kuwan hore dhamayn.
“Berri waanu ciyaaraynaa, kaddibna Champions League ayaanu isku diyaarinaynaa, markaas kaddib ayaanu eegi doonaa. Anigu maalin ba wixii taagan ayaan ka fikiraa, cidina ma garan karto waxa dhici doona.”
Tababare Zidane waxa uu intaas kaddib caddeeyey inuu qandaraas kula jiro Real Madrid, waxaanu yidhi: “Heshiis ayaan kula jiraa kooxda, waxaanan jecelahay inaan halkan sii joogo, laakiin kubadda cagta, waligaa ma garan kartid waxa dhici doona. Halkan si sahal ah ayay wax isku beddelaan, mana garanayo wax dhici doona mustaqbalka.”
Kulanka Manchester City ee lugta labaad ee Champions League ayuu sidoo kale ka hadlay, kaas oo ay City garoonka Santiago Bernabeu lugtii hore kusii adkaatay 2-1, waxaanu yidhi: “Waxaanu ognahay inay ciyaartaasi aad u adkaan doonto, sidii ay lugtii horeba ahayd. Waxba kagama duwanaan doonto (ciyaartii hore). Waxaanu dagaallami doonaa illaa daqiiqadda ugu dambaysa, waana taa sababta aanaan u warwarayn.”